Maxaa ka soo kordhay heshiis kordhintii Lautaro Martinez ee Kooxda Inter Milan? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 16, 2021 at 10:52 Maxaa ka soo kordhay heshiis kordhintii Lautaro Martinez ee Kooxda Inter Milan?2021-09-16T10:52:16+02:00 CAYAARAHA
(Milan) 16 Sebt 2021. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey jiray heshiis kordhin ay kooxda kubadda cagta Inter Milan doonaysay inay u sameyso Weeraryahankeeda Lautaro Martinez.
Haddaba halkee ayay wax marayaan haatan maxaase ka soo kordhay heshiis kordhintii Lautaro Martinez ee Kooxda Inter Milan?.
Suxufiga wax ka qora suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano ayaa warinaya inuu meel wanaagsan marayo heshiis kordhinta Lautaro Martinez, waxaana uu xusay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu Weeraryahankan kooxda Inter Milan u kordhin doono heshiis ku eg illaa bisha June ee sanadka 2026-ka.
Fabrizio Romano waxa uu qormadiisa intaa ku daray in heshiis kordhinta Lautaro Martinez ee Inter Milan ay mareyso qeybihii ugu dambeeyey, isla markaana uu ciyaaryahanku qarka u saaran yahay inuu qandaraaska qalinka ku duugo.
Waxa uu sidoo kale Suxufigu xusay in sare loo qaadi doono mushaharkiisa marka uu Lautaro heshiiskan cusub u saxiixi doono kooxda Inter Milan, kaddib markii uu iska diiday inuu u dhaqaaqo suuqii dhowaa midkood Kooxaha Tottenham iyo Atletico Madrid oo si weyn u doonayey.
Lautaro Martinez ayaa kooxdiisa Inter Milan waxa ay xalay guuldarro 1-0 kala kulmeen Real Madrid oo marti u ahayd kulan qeyb ka ahaa heerka Guruubyada ee Champions League.
« Madaxweyne Deni oo magacaabaya Xubnaha sare ee Garsoorka Puntland
Yaa la wareegay dhulkii lagu dagaalamay ee Banaadir? »